के फेरी लकडाउन हुने हाे ? नगरप्रमुख उद्धव खरेलले गरे यस्ताे अपिल - Budhanilkantha News
के फेरी लकडाउन हुने हाे ? नगरप्रमुख उद्धव खरेलले गरे यस्ताे अपिल
२०७८ श्रावण २५, सोमबार २०:११
लामाे समयकाे लकडाउनबाट आजित नगरवासीहरू नियमित कामका लागि निस्कन थालेका छन् । सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, बैंकिङ क्षेत्र तथा स्थानीय पसलहरूले सेवा बढाउँदै लगेसँगै स्थानीयहरूकाे भिडभाड निकै बढ्न थालेकाे छ । लकडाउन खुकुलो भएसँगै नियमित रूपमा काेभिड विरूद्धकाे खाेप वितरण भइरहेकाे अवस्थामा जनमानसमा काेभिड सङ्क्रमणकाे डर हराउँदै गएकाे जस्ताे देखिन्छ ।
घर बाहिर निस्कदा अधिकांश स्थानीयहरूले मास्क लगाउन छाडिसकेका छन। सार्वजनिक दुरी कायम नगरी लार्पवाहि गर्नका साथै लकडाउनको सुरूवाती दिनहरूमा दैनिक दर्जनाै पटक हात धुनेहरूले बिस्तारै कम गन थालेका छन भने सेनिटाईजरको प्रयोग पनि घट्दै गएको छ। यसका साथै, खाेप लगाएकाहरूलाइ काराेना लाग्दैन भन्ने अफवा समेत फैलिरहेकाे अवस्थामा, नगरप्रमुखले काेभिडको त्रास अझै पनि घटेको छैन भन्ने आवहान गरेका छन ।
समयमा नै सावधानी अपनाईएन र समुदाय स्तरमा रोग फैलियो भने जोखिम व्यवस्थापनमा कठिन्याइ आउनका साथै जन धनकाे क्षति हुने निश्चित छ । जस्काे प्रतिकार्य स्वरूप पुनः लकडाउन गर्नु नै पर्ने छ । तसर्थ, सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाइ अनावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन, निस्कन परेमा अनिवार्य मास्क लगाइ निस्कन, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुन तथा स्वास्थ्य सुरक्षाकाे अन्य मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहनुहुनका लागि नगरप्रमुखले हार्दिक अपिल गरेका छन ।